Mpitsara 16: 1-31
Mpitsara 15 Mpitsara 16 Mpitsara 17
Ary nolazaina tamin'ny Gazita hoe: Tonga aty Samsona. Dia nanemitra azy izy ary nanotrika mandritra ny alina teo am-bavahadin'ny tanàna ka nangina mandritra ny alina; fa hoy izy: Raha maraina ny andro, dia hovonointsika izy.
Ary nandry Samsona mandra-pamatonalina, dia nifoha izy nony namatonalina, ka noraisiny ny vavahadin'ny tanàna mbamin'ny tolana roa, dia nongotany izy mbamin'ny hidiny ka nataony teny an-tsorony, dia nentiny ho any an-tampon'ny tendrombohitra izay tandrifin'i Hebrona.
Dia hoy Delila tamin'i Samsona: Masìna hianao, lazao amiko izay hitoeran'ny herinao lehibe sy izay hahazoana mamatotra anao hahafolaka anao.
Dia hoy Samsona taminy: Raha tady vaovao fito izay tsy mbola maina no hamatorany ahy, dia ho osa aho ka ho tahaka ny olon-kafa.
Ary nisy lehilahy nanotrika ka nitoetra taminy tao an'efitrano. Dia hoy ravehivavy taminy: Hamely anao ny Filistina, ry Samsona! Dia natosany ny tady, tahaka ny fahamaiton'ny taretra rongony, raha lelafin'ny afo. Dia tsy fantatra ny heriny.
Ary hoy Delila tamin'i Samsona: Indro, efa namitaka ahy hianao ka nilaza lainga tamiko; ankehitriny, masìna hianao, lazao amiko izay hahazoana mamatotra anao.
Dia naka mahazaka vaovao Delila, ka namatorany azy, dia hoy izy taminy: Hamely anao ny Filistina, ry Samsona! Ary nisy mpanotrika nitoetra tao an'efitrano. Dia notosan'i Samsona ho afaka amin'ny sandriny ireny tahaka ny fahamaiton'ny taretra.
Dia hoy Delila tamin'i Samsona: Mandraka ankehitriny dia mbola namitaka ahy ihany hianao ka nilaza lainga tamiko; lazao amiko izay hahazoana mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy: Raha tenomina hikambana amin'ny tenona ny foto-bolo fito amin'ny lohako.
Dia hoy ravehivavy taminy: Nahoana hianao no nanao hoe: Tiako hianao, nefa ny fonao tsy amiko tsinona? Efa namitaka ahy in-telo hianao izay, ka tsy mbola nolazainao tamiko ihany izay itoeran'ny herinao lehibe.
Ary rehefa nitorikisina taminy isan-andro ravehivavy ka nahasosotra azy, dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina.
Ary dia nambarany azy ny tao am-pony rehetra, ka hoy izy taminy: Tsy mbola nokasihin-kareza ny lohako, fa Nazirita ho an'Andriamanitra hatrany an-kibon-dreniko aho; koa raha haratana aho, dia hiala amiko ny heriko, ary ho osa aho ka ho tahaka ny olona rehetra.
Ary rehefa hitan'i Delila fa efa nambarany azy ny tao am-pony rehetra, dia naniraka izy nampaka ireo andrianan'ny Filistina nanao hoe: Miakara amin'izao indray mandeha izao, fa efa nambarany ahy ny tao am-pony rehetra. Ary ireo andrianan'ny Filistina niakatra ho any aminy nitondra ny vola teny an-tànany.
Ary nivory ireo andrianan'ny Filistina hamono zavatra betsaka hatao fanatitra ho an'i Dagona andriamaniny sy hifaly; fa hoy izy: Efa natolotry ny andriamanitsika eto an-tànantsika Samsona fahavalontsika.
Ary rehefa nahita azy ny vahoaka, dia nidera ny andriamaniny ka nanao hoe: Efa natolotry ny andriamanitsika eto an-tànantsika ilay fahavalontsika, mpanimba ny tanintsika, izay naha-be maty antsika.
Dia notanan'i Samsona ny andry roa teo afovoany izay nanohana ny trano, ny anankiray tamin'ny tànany ankavanana, ny anankiray tamin'ny tànany ankavia, ka niankina teo izy.